Lindenwood တက္ကသိုလ်မှကျောင်းသားများအတွက်စတူဒီယိုနှင့်ကွင်းဆင်းထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက် Hitachi HDTV ကင်မရာများကိုအားထားသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Lindenwood တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား-Run ကိုစတူဒီယိုနှင့်ဖျော်ဖြေမှုထုတ်လုပ်မှုများအတွက် Hitachi HDTV ကင်မရာများကိုအပေါ်မှီခို
Lindenwood တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား-Run ကိုစတူဒီယိုနှင့်ဖျော်ဖြေမှုထုတ်လုပ်မှုများအတွက် Hitachi HDTV ကင်မရာများကိုအပေါ်မှီခို
HD ကင်မရာအဖြည့်စတူဒီယိုထုတ်လုပ်မှုနှင့်ကေဘယ်လ်နှင့်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များအတွက်သေ့အားကစားသမားကိုဖုံးလွှမ်းရန်လေးကျစ်လစ်သိပ်သည်း Z-HD1000 ကင်မရာများများအတွက်သုံး High-end SK ကို-HD5000 ရဲ့ပါဝင်သည်
Woodbury, နယူးယော့, ဇွန်လ 29, 2015 - Lindenwood တက္ကသိုလ်-တစ်စိန့်ချားလ်စ်အတွက်ထင်ရှားတဲ့4နှစ်လစ်ဘရယ်အနုပညာအဖွဲ့အစည်း, MO ကို-ထားပြီးယင်း၏ကျောင်းဆက်သွယ်ရေးသင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့် Hitachi HDTV ကင်မရာများအပေါ် Lindenwood တက္ကသိုလ်တီဗီ (LUTV) ကေဘယ်လ်လိုင်းကိုဘဏ်ဍာအခြေခံပါတယ်။
Lindenwood သုံး High-end installed Hitachi SK ကို-HD1000 စတူဒီယို / လယ်ကွင်းကင်မရာများ ပညာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာပရိုဂရမ်းမင်း၏ကျယ်ပြန့်ခင်းကျင်းထုတ်လုပ်ရန်အသုံးပြုသောသောက၎င်း၏ 40 × 40 ခြေလျင် LUTV စတူဒီယိုထဲမှာ။ LUTV-မြင့်ပညာရေး cable ကိုရုပ်သံလိုင်းစိန့်ချားလ်စ် County- တက္ကသိုလ်ရဲ့မှတဆင့်ထုတ်လွှင့်အဖြစ် webcasts များအတွက်ဒေသခံပဋိညာဉ်စာတမ်း Cable ကိုနှင့် AT & T ကဦး-ကျမ်းပိုဒ်စနစ်များကိုမှ programming ကိုကယ်တင်ဘို့ က်ဘ်ဆိုက်.
အဆိုပါ SK ကို-HD1000 ရဲ့နှင့်အတူ၎င်း၏အပြုသဘောအတွေ့အကြုံအပေါ်အခြေခံပြီး, တက္ကသိုလ်အကြာတွင်လေးဝယ်ယူ Z-HD5000 HDTV ထုတ်လုပ်မှုကင်မရာများ ယင်း၏ LUTV ဆိုင်များတွင်များအတွက် Lindenwood သေ့ NCAA ရတိုင်း II ကိုအားကစားဖြစ်ရပ်များ၏တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှလွှမ်းခြုံထုတ်လုပ်ရန်။ အဆိုပါ Z-HD5000s ဗီဒီယိုသစ်တစ်ခုထုတ်လုပ်မှုကိုထိန်းချုပ်တဲ့အခန်းနဲ့ကျောင်းဝင်း-ကျယ်ပြန့်ဖိုင်ဘာ optic cable ကိုကွန်ယက်အသစ်တခုကျောင်းသားအားကစားစင်တာ (sac) တည်ဆောက်ခြင်းဝိုငျးကြောင်းပိုကြီးအဆင့်မြှင့်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်သွယ်ရေးကျောင်းသားများကိုသူတို့ကစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်သူတို့ရဲ့အနာဂတ်အလုပ်အကိုင်အတွက်ကြုံတွေ့ရဖွယ်ရှိနေ high-performance ကိုကင်မရာဂီယာအမျိုးအစားကိုအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ Hitachi ကင်မရာများကို ရွေးချယ်. ," Ed က Voss လက်ထောက်ပါမောက္ခနဲ့ Lindenwood တက္ကသိုလ်မှ LUTV Operations Manager ကဆိုပါတယ် , စိန့်ချားလ်စ်, MO ကို။
"သူတို့က high-performance ကို2/3လက်မအရွယ် CCDs ပင်စိန်ခေါ်မှုနိမ့်အလင်းအခြေအနေများတွင်တစ်ဦးအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ရုပ်ပုံထုတ်လုပ်ရန်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျနော်တို့အထူးသဖြင့် Hitachi HDTV ကင်မရာများကြိုက်တယ်," Voss ကဆိုသည်။ "သူတို့ကလည်းကျောင်းသားလေ့ကျင့်ရေးအတွက်မရှိမဖြစ်ဖြစ်ကြောင်းကြမ်းတမ်းနှင့်အသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေနှစ်ခု attribute တွေပါတယ်။ "
Voss, ကျောင်းသားတစ်ဦးမတော်တဆသုံးခု SK ကို-HD1000 ရဲ့တဦးတည်းစတူဒီယိုရဲ့ကွန်ကရစ်ကြမ်းပြင်ပေါ်သို့ '' ပထမဦးဆုံးဦးခေါင်း '' ကျော်လဲကျစေသည့်အခါအချိန်ကိုပြန်ပြောင်းပြောပြသည် bounce ပြီးတော့ထပ်အထပ်နှိပ်ပါ။ "မသာကဘာမျှမဖြစ်ပျက်ခဲ့လျှင်အဖြစ်ကျနော်တို့က၎င်း၏ရုပ်ပုံအရည်အသွေးနှင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြားနှစ်ဦးကို SK ကို-HD1000 စတူဒီယိုကင်မရာများ၏အကြားမည်သည့်ခြားနားချက်ကိုပြောပြနိုင်ဘူးဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြ," Voss ကဆိုသည်။
တစ်ခု NCAA ရတိုင်း II ကိုကျောင်းကဖြစ်လာပေါ်၌ Lindenwood 1080i မှာနေထိုင်သူတို့၏ဂိမ်းများကိုဖုံးလွှမ်းရန်အဓိကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအဆင့်မြှင့်တင်စတင်ခဲ့ HD။ Voss နှင့်သူ၏ဒြေလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကသူတို့ဒေသခံ Hitachi ကုန်သည်, ခေတ်သစ်ဆက်သွယ်ရေးဆက်သွယ်မေးမြန်းရာနှင့်ဖိုင်ဘာ Adapter ကနှင့် Fujinon XA5000x20BERM HDTV မျက်ကပ်မှန်နှင့်အတူလေး Hitachi Z-HD8.5 Multi-format နဲ့ကင်မရာများအမိန့်ပေးခဲ့သည်။
အဆိုပါကင်မရာများယခုကိုလည်းက Black Magic ATEM ခလုတ်, Aja Key ကို Pro ကို Recorder နှင့် Sachtler tripod ပါရှိသည်တဲ့ယင်ကောင်-pack ကို၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဤသည် flypack, on-ကျောင်းဝင်းဘောလုံးအားကစားကွင်းအပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောနေရာများမှယူဘတ်စကက်ဘောကွင်းနှင့်အနုပညာဗဟိုဌာနဖျော်ဖြေအဖြစ်ဒေသခံရေခဲဟော်ကီကွင်းများကဲ့သို့ Off-ကျောင်းဝင်းက်ဘ်ဆိုက်များမှဖြစ်ပါတယ်။ တက္ကသိုလ်နယ်မြေကွင်း၏တစ်ဦးချင်းစီမှာလယ်ပြင်ကင်မရာများမှတဆင့်ချိတ်ဆက်ထား SMPTE အဆိုပါအချက်ပြမှုများကို convert နှင့် sac ထိန်းချုပ်မှုအခန်းဖိုင်ဘာမှတဆင့်သူတို့ကိုပို့ဆောင်ကြောင်းတဲစနစ်များကိုမှမျိုးစပ်ဖိုင်ဘာကေဘယ်လ်ကြိုး။
"ကျနော်တို့ရင်ဆိုင်ရတစ်ခုမှာထုတ်လုပ်မှုစိန်ခေါ်မှုကျနော်တို့မကြာခဏအကောင်းဆုံးအလင်းရောင်အခြေအနေများထက်လျော့နည်းအတွက်လုပ်ကိုင်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဥပမာအားဖြင့်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘောလုံးအားကစားကွင်းအတွင်းအလင်းရောင်တောက်ပမွန်းတည့်နေညဉ့်မှောင်မိုက်အထိနိုင်ပါတယ်။ နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြဇာတ်ရုံအာကာသအတွင်းကျနော်တို့မကြာခဏသိသိသာသာဇာတ်နာအောင်ပြောခြင်းအလင်းရောင်နှင့်အတူဆက်ဆံပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Hitachi ကင်မရာများထက်သာလွန်သောရလဒ်များကိုနှင့်အတူအလင်းရောင်အဆင့်ဆင့်၏ဤ dynamic range ကိုကိုင်တွယ်, "Voss ကဆိုသည်။
"ဒီအဖြစ်မှန်ဒီကင်မရာများထူထောင်ကြောင်း, သူတို့အပျေါမှာဖွင့်နှင့်သူတို့ပဲအလုပ်လုပ်ပါ" ဟုသူကဆက်ပြောသည်။ "သူတို့ကကျနော်တို့နေ့စဉ်အပေါ်အားကိုးကြောင်းအစစ်အမှန်လိုမျိုးတော့ကင်မရာပါပဲ။ "
Hitachi Kokusai လျှပ်စစ်အကြောင်း
Hitachi Kokusai လျှပ်စစ်အမရေိ, Ltd ဒီဇိုင်းများ, ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ထုတ်လွှင့်ရုပ်မြင်သံကြားကေဘယ်လ်, ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှုနှင့်စက်မှုရူပါရုံကိုစျေးကွက်များအတွက်ဗီဒီယိုကင်မရာများ, ဒစ်ဂျစ်တယ်ဂီယာ, အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်အသံဖမ်းကိရိယာများကိုဈေးကှကျ။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, (516) 921-7200 ခေါ်ပါသို့မဟုတ်မှာ Hitachi ရဲ့ web site ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု www.hitachikokusai.us
Hitachi Kokusai လျှပ်စစ်, Inc (Tse, OSE: 6756), တစ်ဦး Hitachi, Ltd အုပ်စုသည်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
အားလုံးစာနယ်ဇင်းထုတ်ပြန်ပြောကြားချက်များနှင့်ထုတ်ကုန်ပုံရိပ်တွေအပြည့်အဝဗားရှင်း pressroom အပိုင်းအတွက်ကို web site ပေါ်တွင် posted နေကြသည်: www.hitachikokusai.us
Hitachi, Ltd အကြောင်း
Hitachi, Ltd (Tse: 6501) တိုကျို, ဂျပန်၌ရုံးချုပ်သောကြောင့်ပါရမီအသင်းနှင့်ကမ္ဘာ့စျေးကွက်များတွင်သက်သေအတွေ့အကြုံနှင့်အတူလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုဖြေကြားကြောင်းတီထွင်မှုကယ်တင်တတ်၏။ (မတ်လ 2014, 31 အဆုံးသတ်) ဘဏ္ဍာရေးနှစ် 2015 များအတွက်ကုမ္ပဏီ၏ပေါင်းစုဝင်ငွေ 9,761 ဘီလီယံယန်း ($ 81.3 ဘီလျံ) စုစုပေါင်းမှာ။ Hitachi ပါဝါ & အခြေခံအဆောက်အအုံစနစ်များ, သတင်းအချက်အလက် & ဆက်သွယ်ရေးစနစ်များ, ဆောက်လုပ်ရေးစက်ပစ္စည်း, မြင့်သော functional ဖြစ်စေပစ္စည်းများ & အစိတ်အပိုင်းများ, မော်တော်ကားစနစ်များ, ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်အခြားသူများလည်းပါဝင်သည်သောလူမှုဆန်းသစ်တီထွင်စီးပွားရေး, အပေါ်ယခင်ကထက်ကိုပိုပြီးအာရုံစူးစိုက်သည်။ Hitachi အပေါ်ပိုမိုသောအချက်အလက်များအဘို့, မှာကုမ္ပဏီ၏ဝဘ်ဆိုဒ်သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး www.hitachi.com.
အသံလွှင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ပညာရေးနည်းပညာ HD ကိုကင်မရာများကို Hitachi ထုတ်လုပ်မှု တီဗီနည်းပညာ ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2015-06-29
ယခင်: QSR စနစ်များပိုမိုထိရောက်သော Reality TV ကို Productions လုပ်ငန်းကူညီမည်
နောက်တစ်ခု: အသံဖုန်းများအတွက် '' Highly မျှော်လင့် SL-6 အာဏာနှင့်ကြိုးမဲ့စနစ်အခုတော့သင်္ဘော